Ufuna ukufukula abadwebi kuleli
UNksz Nonto Msomi othi ufisa ukuguqula isimo empilweni yamaciko asafufusa Isithombe: Sithunyelwe
INTOKAZI yaseManzimtoti eThekwini, eyaqoka ukwenza iziqu zokuba wumdwebi yize unina wayengahambisani naleso sinqumo efuna ibe ngudokotela, ithi ayizisoli ngalokho.
UNksz Nontobeko Msomi (32) uthi akazisoli ngokungena emkhakheni oneqhaza elikhulu ekuthuthukiseni amaciko.
UNksz Msomi owenza izifundo zeFine Arts eDurban University of Technology, uyimenenja eyengamele imisebenzi yesikhungo esibhekelela ukuthuthukiswa kwabadwebi, i-ArtbankSA engaphansi kweMuseum yaseBleomfontein. Uthe lo mkhakha udinga umuntu onothando olujulile kwezobuciko ngoba ukuchuma kuwona, kudinga intshisekelo.
UNksz Msomi osemnkantshubomvu kulo mkhakha uthe inhloso yakhe ngukwenza ushintsho empilweni yamaciko angabadwebi ngoba uyabazi ubunzima bokuba kule ndima futhi kuningi akubone ngesikhathi esafika, emuva kokuqeda izifundo zakhe.
“Kuningi engifisa ukukulungisa emkhakheni wezamaciko okungangamandla ami nengibona kungalekelela ozakwethu esinabo kulo mkhakha ongelula neze, njengoba waziwa ngokuthandwa ikakhulukazi ngabamhlophe. Ukwentuleka kolwazi ezikoleni zabantu abamnyama nakho kuyangikhathaza ngoba baningi abantu abasha abanekhono eliyisimanga lokudweba,” kubeka le menenja.
Echaza ngomsebenzi awenzayo e-ArtsbankSA, uthe isikhungo asisebenzelayo sithenga imisebenzi yabadwebi abasafika kwimakethe ngenhloso yokudayisela iminyango kahulumeni, amabhizinisi azimele kanjalo nabantu abathanda ukuhlobisa ngemidwebo emizini yabo.
Usezinze eFree State ngenxa yomsebenzi, uke waba ngusihlalo wekomiti lohlelo lwezamasiko eThekwini, elalingaphansi kwengqungquthela eyayengamele amazwe wonke eyayihlelwe yiTheku, i-21st International AIDS2016. Uke waba ngusihlalo wekomiti lemibukiso yemisebenzi yabadwebi eKZN SA Gallery eseGlenwood, eThekwini.
UNksz Msomi uke waveza amagalelo akhe naseBAT Centre Trust waphinde wasebenza eVisual Arts Network of South Africa, ebambe iqhaza ekuthuthukisweni kwamaciko nabadwebi.